Inona no jerena ary ahoana no fomba hahatongavana any amin'ny tanànan'i Bruges | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | Belzika, mpamosavy, tanàna, Fialantsasatra any Eropa, General
La Tanànan'i Bruges Izy io dia iray amin'ireo toerana mahafinaritra indrindra eto amin'ny kaontinanta taloha, satria ny tanàna taloha dia voatahiry tsara ary manolotra traikefa miavaka raha oharina amin'ireo tanàna maoderina hafa. Raha mitady ianao 'Bruges Belzika'Ao amin'ny Google, hanana hevitra maro ianao hahitana trano sy izay hitsidika. Eto izahay dia hanao famintinana mba hahafantaranao izay tena zava-dehibe sy izay tsy tokony hohadinoina.
Fa ankoatry ny mazava momba izay tiana ho hita ao an-tanànan'i Bruges dia tsy maintsy amboary ny dia. Misy torolàlana vitsivitsy izay tsy maintsy raisina, mba tsy hahatongavan'izy ireo ary hahagaga antsika. Tokony hotarihin'ny torohevitr'ireo efa teo ianao ary hahafantatra ny fomba hivezivezena hahita ny hevitra mahaliana rehetra.
1 Ahoana ny fomba hahatongavana any Bruges
2 Mijanona ao Bruges
3 Inona no ho hita any Bruges
Ahoana ny fomba hahatongavana any Bruges
Betsaka ny orinasa fiaramanidina manolotra sidina mora vidina mankany Bruxelles, satria eto no ahitantsika ireo seranam-piaramanidina lehibe akaiky an'i Bruges. Samy manolotra sidina mora vidy i Ryanair sy i Vueling hanararaotra sy hankafizany ity tanàna tsara tarehy ity, izay tonga amin'ny seranam-piara-manidina roa. Avy amin'izy roa dia azonao atao ny mitondra fitateram-bahoaka mankany Bruges, ny fiaran-dalamby no haingana indrindra ary atoro anao. Raha sanatria ka mamela antsika any Charleroi ity dia tsy maintsy mandeha lamasinina na bus mankany afovoan'i Bruxelles ianao ary avy eo dia misy fiaran-dalamby mivantana mankany Bruges.
Mijanona ao Bruges
Alohan'ny hahatongavanao ao an-tanàna dia tsy maintsy mitady a ianao fonenana mety. Ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny mijanona eo afovoany manan-tantara, satria izy io dia iray amin'ireo faritra tsara tarehy sy tsara tarehy indrindra. Ao amin'ny Hotel Academie Bruges ho hitanao ny tenanao ao amin'ny tanàna taloha, izay ahafahanao mifindra amin'ny hevi-dehibe mahaliana rehefa mankafy ny rivotra mangina ao amin'ilay tanàna taloha.
Raha miresaka momba ny fivezivezena ny tanàna dia manana safidy maromaro ianao. Tanàna kely izy io, izay matetika no azo aleha an-tongotra ny toerana misy azy, fa raha te hahatsapa ho toy ny ampahany amin'ny tanàna ianao dia afaka mampiasa bisikileta, nohofana amin'ny hotely na amin'ny teboka samihafa. Misy koa tamba-jotra mahomby amin'ny bus any an-toerana.
Raha te hijery ireo tranombakoka sy tsangambato dia azonao atao ny mividy ny Karatra an-tanànan'ny Brugge, karatra fizahantany toa ny any amin'ny tanàna maro hafa ahafahanao miditra amin'ny toerana maro rehefa mitahiry vola. Manome saika ny tranombakoka rehetra izy io ary koa misy fihenam-bidy amin'ny toerana manan-danja sy ny manintona ao an-tanàna.
Inona no ho hita any Bruges
Ireo tanàna rehetra ireo dia misy a Plaza Ben'ny tanàna na Grote Markt, ary Bruges dia tsy tokony ho latsa-danja. Ity no kianja afovoany, izay misy hetsika foana ary ho hitantsika koa ny Belfort na lakolosy izay ahitanao ny tanàna iray manontolo. Manakaiky an'ity kianja ity dia misy iray hafa izay tsy azontsika adino, ny Burg Square, misy ny trano misy ny Gothic City Hall miaraka amin'ny Hall Gothic malaza misy sary hosodoko, ny Basilica of the Holy Blood ary ny Brugse Vrije misy trano Renaissance. Antoko maritrano izay tsy hadinontsika ny mahita ireo trano tsara tarehy sy manaitra indrindra ao Bruges.
Ity tanàna ity dia fantatra amin'ny anarana hoe Venise any avaratra, noho izany dia ilaina ny mijery ny fantson'izy ireo. Misy zavatra tafiditra ao anaty karatra fizahan-tany dia ny fitsangantsanganana an-tsambo amin'ireo lakandrano ireo hahitana ny tanàna amin'ny fomba fijery hafa. Traikefa izay tsy azontsika adino, ary misy pier dimy izay ialan'ny dia isan'andro. Ny lakandranon'i Groenrei no zava-dehibe indrindra, satria mamakivaky ny iray amin'ireo toerana misy sary indrindra ao an-tanàna iray manontolo, ny dock Rosario na Rozenhoedkaai.
Mila miantsena foana ianao tranombakoka lehibe eto an-tanàna hahafantarana ny tantara sy ny sangan'asa, indrindra rehefa miresaka momba ny tanàna eropeana isika izay manana zavakanto be dia be ao ambadik'izany. Ao amin'ny Groeningemuseum isika dia afaka mahita ny sangan'asan'ny flamingo voalohany malaza amin'ny kanto toa an'i Van Eyck na Hugo van der Goes. Eo akaiky eo dia misy tranombakoka iray hafa izay azo tsidihina miaraka amin'ilay tapakila mitovy amin'izany, noho izany dia mila manararaotra ianao, ny Arentshuis.
Misy ihany koa ny traikefa tsy manam-paharoa, toy ny fakana a sari-tany 'tanana vita amin'ny Brugge' ao amin'ny biraon'ny fizahantany, hetsika izay tian'ny mpanao asa tanana ao an-tanàna hampahafantatra ny sangan'asany amin'ny tsena manerantany. Amin'izany dia hahita fivarotana asa tanana misy zavatra manokana ianao, hahafantaranao ny zavakanton'ny flamingo. Fomba fahitana ny zavatra rehetra azon'ny tanàna omena antsika io, na amin'ny resaka fiantsenana aza. Ho hitantsika ireo fivarotana mpanao kanto, fivarotana kiraro, fivarotana manokana ary koa fivarotana mofomamy matsiro miaraka amin'ny sôkôla malaza. Ao amin'ity torolàlana ity ihany koa ny fivarotana sôkôla tsara indrindra, ka mahatonga azy io ho sari-tany mendrika hijerena hankafy ny tsara indrindra amin'ny Bruges.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ahoana ny fomba handaminana ny dia sy izay ho hitanao ao Bruges